आफ्नै वेबसाइटले किरण कमरेडलाई ‘प्रेसिडेन्ट’ बनायो | Thenextfront
नवप्रतिक्रियावादी प्रचण्ड–बाबुराम गुटबाट सम्बन्ध विच्छेद गरी नयाँ पार्टी नेकपा–माओवादी बनाएको अब १ वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीच यो पार्टी आफ्नो परिचय र मूल्यलाई स्थापित गर्न निकै सङ्घर्षरत रह्यो र रहिरहेको छ । वैचारिक र व्यावहारिक पक्ष नै यसलाई बुझ्ने र जान्ने प्रमुख आधारहरू हुन् । आजको समयमा सूचना र सञ्चारको ठूलो महत्त्व छ । विश्वभरि एकैचोटि कुनै पनि वस्तुका बारेमा सहज किसिमले जान्ने र बुझ्ने माध्यम भनेको वेबसाइट नै हो । नयाँ पार्टीले पनि यसतर्फ ध्यान दियो, यो सह्राहनीय पक्ष हो । परन्तु विडम्बनाको कुरा चाहिँ के छ भने यो पार्टीले चलाउन थालेको नयाँ वेबसाइटले सोही पार्टीको हुर्मत लिएको देखिन्छ/पाइन्छ ।
नयाँ पार्टीको जन्म भएको १ वर्ष पुग्न लागेको छ भने वेबसाइट निर्माण गर्न थालेको पनि झन्डैझन्डै १ वर्ष हुन लागेको छ । तर यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । वेबसाइट अझै झालेमाले स्वरूपमै छ । हाम्रा नेताहरूले यो वेबसाइट हेरेका छन्–छैनन् म भन्न सक्तिन । नयाँ अध्ययन–चिन्तनको त कुरै छाडौँ, यसतर्फ वहाँहरूको रचि घट्तो छ र भन्नुपर्ने हुन्छ ‘कामको व्यस्तता’ का कारण आफ्नो पार्टीको वेबसाइट हेर्न फुर्सत वहाँहरूलाई छैन र रहेन छ ޽। पार्टीको वेबसाइटले के भन्छ, के–कस्तो सन्देश दिइरहेको छ र कस्ता सूचनाहरू र के कस्ता डाटाहरू त्यहाँ अपलोड गरिएको छ र भइरहेका छन् भन्ने कुरा सारै गम्भीर विषय हो । बडे नेताहरूले ‘नभ्याए’ पनि पार्टी ‘कार्यालय’ , ‘सूचनासंचार’ को क्षेत्र हेर्नेले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय हो यो । तर विडम्बनाको विषय, सो पार्टीले चलाएको वेबसाइटले सोही पार्टीका नेताहरूको हुर्मत लिएको छ ।
यो वेबसाइट हेरेपछि नयाँ पार्टीसित भाषाको क्षेत्रमा (नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै) को राम्रो दखल भएका कार्यकर्ता–नेता रहेनछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसमा पनि अङ्ग्रेजी शव्दको मर्म बुझेको, प्रयोग र वाक्यगठनमा दक्ष भएको मान्छेको त ठूलो समस्या रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वेबसाइटमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगको विजोग नै छ । यसको प्रतिबिम्बन एउटा समाचारमा भएको छ ।
पहिलो कुरा, कुनै पनि समाचार वा सामग्री पोस्ट गर्दा कुन मितिको हो, त्यो प्रस्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । यो वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको मिति पाइँदैन । अझ क्रान्तिकारी पार्टीको वेबसाइटमा के राखने र के नराखने प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । यो समाचारमूलक हुने कि विचारमूलक भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
भाषाको त कुरै छाडौँ, यो वेबसाइट नीतिगत प्रश्नमै प्रस्ट छैन । हामीले कस्तो वेबसाइट चलाउन खोजेको हो प्रस्ट छैन । भाषाको प्रयोग कति भ्रमपूर्ण छ भन्ने कुरा मिति नराखिएको एउटा समचारले प्रस्ट पारेको छ । सो सामग्रीले अध्यक्ष कमरेड किरणलाई प्रेसिडेन्ट बनाएको छ । जस्तो सो समाचारमा भनिएको छ
Radio Mirme’s 6th Anniversary
President Kiran while addressing the 6TH anniversary programme of radio mirmire held in sambad dabali in Anam Nagar, said that the Gun is now legal in Nepal.
राष्ट्रपति घोषणा गररे प्रचण्ड भित्तामा सीमित भएका थिए । नयाँ पार्टीको वेबसाइट cpnmaoist.org ले कमरेड किरणलाई कमरेड प्रेसिडेन्ट बनाएर रमाइलो गरेको छ । यसले नयाँ पार्टीको काम गराइको तारतम्य र सूचना–संचारको बन्दोबस्तीको स्थितिलाई भने राम्रोसित प्रतिविम्बित गरेको छ ।
भाषाको प्रयोग कति त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा तलको लेखनबाट थाहा हुन्छ :
केन्द्रीय सल्लाहकारहरु क.किरणका बाबु र क.कुन्त शर्माकी आमाको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गरी शोक सन्तप्त परिवारलाई समवेदना प्रकट गरिया।
यहाँ कुन्त शर्मा को नाम त बेठीक नै छ, किरणका बाबु होइन, पिताजी शव्द प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
त्यसैगरी About Us लेखिएका कतिपय कुराहरू त्रुटीपूर्ण छन् । उदाहरंणका रूपमा तलको भनाइलाई लिन सकिन्छ । ऐतिहासिक दृष्टिले तलको भनाइ त्रुटिपूर्ण छ ।
1991 – CPN(Mashal) adopted Marxism-Leninism-Maoism as the guiding principle of the Party and line of protracted people’s war.
त्यसैगरी यो वेबसाइटमा कमरेड भक्तबहादुरको इतिहासलाई पनि निषेघ गरिएको छ ।
प्रचण्ड पार्टीको वेबसाइटबाट सामग्री जस्ताकोतस्तै लिनुको परिणाम हो यो । प्राविधिक जिम्मेवारी र वैचारिक जिम्मेवारी फरकफरक कुरा हुन् प्राविधक मान्छेलाई वैचारिक जिम्मेवारी दिनुको परिणाम यस्तै हुन्छ । आफ्नो वेबसाइट आफ्नै विरुद्ध उभिन्छ । क्रान्तिकारी पार्टीको वेबसाइटको असाध्यै महत्व हुन्छ । यहाँ गम्भीरताको अभाव देखियो । यसको कारण खोजिनु पर्दछ र यो सच्याउनु आवश्यक छ ।
« कमरेड किरणलाई भाकपा (माओवादी) को चिठी
अनुभववादी जडता र उमेरवादी वितण्डावाद »
5 Responses to “आफ्नै वेबसाइटले किरण कमरेडलाई ‘प्रेसिडेन्ट’ बनायो”
बिजोग नै रहेछ नि
In fact it reflects the working style of ‘New Party”, whatafun!
It is important and also essential that the message communicated is accurate, clear and grammatically correct. There could be 100s of leaders, cadres and well-wishers who could provide their input to improve party documents, propaganda materials and other party literature. Please mobilize their expertise when you need such services.
Thanks Divashji, afteralong long gap we have got this name in this website.
Kumar ji, Thank you very much. I was around.